Pop Pin New September 16, 2019
ကိုယ်နဲ့ တစ်ညစာပျော်ဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေးကို သူတောင်းစားကိုပေးပြီး ပျော်ခိုင်းလိုက်သောအခါ ဘားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့ အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့ …
လှိုင်​သာယာ ​အောင်​​မြေသာယာ ဘုရားမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်
လှိုင်​သာယာ ​အောင်​​မြေသာယာ ဘုရားမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ် အောင်​​မြေသာယာ ဘုရားတွင်​ ဘိုးတော်​တစ်ယောက် ဗေဒင်ဟောနေတာကို ဘေးကလူငယ်အုပ်စု ၄/၅ယောက်က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလိုလိုနဲ့ မျက်နှာပြောင်နေကြသည်။ ကြာလာတော့ဘိုးတော်လဲ ဒေါသထွက်လာပြီး….. `ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ငါကိုဘာထင်နေလဲ၊ ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ!´´ အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စုက မကြောက်တဲ့အပြင် ခွက်ထိုးခွက်လန် ဟားတိုက်ရယ်မောပြီး လှောင်ပြောင်နေကြသေးသည်။ ဒါပေမယ်… ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ …
မြန်မာပြည်မှာ မယားငယ်ထားတာ ခေတ်စားသတဲ့ မန်းလေးက လူတစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က ရန်ကုန်မှာ အငယ်တစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်။ အငယ်အတွက် သိန်းလေးထောင်တန် အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးခဲ့ပြီး လစဉ်လတိုင်း ဆယ်သိန်းပေးသုံးခဲ့တယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ အငယ်နဲ့ သူလမ်းခွဲလိုက်တယ်။ ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ကိုရောင်းတော့ သိန်းတစ်သောင်းရတယ်။ တွက်ကြည့်တော့ မယားငယ်ကို ၆ နှစ် အလကားတွဲလိုက်ရပြီး၊ သိန်းငါးထောင်မြတ်သွားတယ်။ မယားငယ်ထားတာဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလို့ သူဆိုတယ်။ …
ရွှေလီမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတာလေးပါ ဒုတ်နဲ့လာတာမြန်မာအမျိုးသမီးကလက်နက်ပုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာတရုတ်ရဲပြေးရတဲ့ video… 👇🏻👇🏻👇🏻
Pop Pin New September 14, 2019
ရွှေလီမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတာလေးပါ ဒုတ်နဲ့လာတာမြန်မာအမျိုးသမီးကလက်နက်ပုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာတရုတ်ရဲပြေးရတဲ့ video… 👇🏻👇🏻👇🏻 တရုတ်ကပထမ.ဒုတ်နဲ့လာတာ..မြန်မာအမျိုးသမီးက. 😁လက်နက်ပုန်း😁နဲ့.တိုက်ခိုက် မလို့လုပ်တော့မှာ.ကိုရွှေတရုတ်ကကြောက်ပြီးနောက်ဆုပ်သွားတာ..😂 ရွှေလီမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတာလေးပါ ဒုတ်နဲ့လာတာမြန်မာအမျိုးသမီးကလက်နက်ပုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာတရုတ်ရဲပြေးရတဲ့ video… 👇🏻👇🏻👇🏻 တရုတ်ကပထမ.ဒုတ်နဲ့လာတာ..မြန်မာအမျိုးသမီးက. 😁လက်နက်ပုန်း😁နဲ့.တိုက်ခိုက် မလို့လုပ်တော့မှာ.ကိုရွှေတရုတ်ကကြောက်ပြီးနောက်ဆုပ်သွားတာ..😂 ရွှေလီမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတာလေးပါ ဒုတ်နဲ့လာတာမြန်မာအမျိုးသမီးကလက်နက်ပုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာတရုတ်ရဲပြေးရတဲ့ video… 👇🏻👇🏻👇🏻 တရုတ်ကပထမ.ဒုတ်နဲ့လာတာ..မြန်မာအမျိုးသမီးက. 😁လက်နက်ပုန်း😁နဲ့.တိုက်ခိုက် မလို့လုပ်တော့မှာ.ကိုရွှေတရုတ်ကကြောက်ပြီးနောက်ဆုပ်သွားတာ..😂 ရွှေလီမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတာလေးပါ ဒုတ်နဲ့လာတာမြန်မာအမျိုးသမီးကလက်နက်ပုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာတရုတ်ရဲပြေးရတဲ့ video… 👇🏻👇🏻👇🏻 …
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ MTV လေးရဲ့ ရိုက်ချက်။ မိုးရွာတာနဲ့ တိုင်ဖက်လွမ်းတာက အသက်ပါနော
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ MTV လေးရဲ့ ရိုက်ချက်။ မိုးရွာတာနဲ့ တိုင်ဖက်လွမ်းတာက အသက်ပါနော အနုပညာကို အရမ်း ဝါသနားကြီးလွန်းတဲ့ လေထိုး ကျွတ်ဖာ ဘဝသမားလေး Rap-ကျားကြီး (ခေါ်) MC-ပိုင်ခန့် ဝါသနာကို အခြေပြုကာ ချွေတာသုံးလို့ ငွေလေးစုပြီး နိုင်သလောက် ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူသိများပြီး အားပေးနေကြတဲ့ Rap-ကျားကြီး …
ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် ယားလွန်းလို့ ကုတ်မိရာကနေ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း
Pop Pin New September 5, 2019
ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် ယားလွန်းလို့ ကုတ်မိရာကနေ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း. . . ကျွန်​မ၏ တင်ပါးကို ယားလွန်း၍ ကုတ်မိသည် . .သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးမှာရှိသည် . .တစ်ယောက် က မော်လီ တစ်ယောက်က ခင်မြရည် ဖြစ်သည်။ ကျမ ယားလို့ တင်ပါးကုတ်မိတဲ့ အခါ သူငယ်ချင်း မော်လီက …
ယောက်ကျားတွေရဲ့ ကုသိုလ်စိတ်၊ သဒ္ဒါတရားတွေဟာ မိန်းမတွေထက် ပိုမိုများပြားတယ်ဆိုတာ သက်သေနဲ့တကွဖေါ်ပြလိုက်ပါပြီ
အဲ့ဒီက ဝန်ထမ်းမလေးတွေဖြစ်တဲ့ သံစဉ်၊ မြတ်နိုး၊ ကြယ်စင်၊ ဂျုလိုင်၊ စနိုး၊ လေပြေ တို့ရဲ့ နောက်ကွယ်က သူတို့ကို မှီခိုနေကြတဲ့ လေဖြတ်လို့ ဆေးကုနေရတဲ့ အသက် ၆၀ ကျော် အဖေကြီး၊ အိမ်တကာလှည့် အဝတ်လျော်နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အမေ၊ ၃ တန်းတက်နေတဲ့ မောင်လေး၊ ဆယ်တန်းကျုရှင်မနေနိုင်တဲ့ ညီမလေး၊ အိမ်ငှားစာချုပ်ကပြည့်တော့မှာမို့ စပေါ်တင်ဖို့ငွေလိုနေသူတွေ …
မွေးလမ်းကြောင်းထဲ သခွားသီးတစ်နေတာ ချော်လဲသွားလို့ပါဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး
အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး သူမရဲ့ သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ သခွားသီး တစ်နေတဲ့အတွက် ဆေးရုံသို့ အမြန်ပို့ကာဆရာဝန်တွေ ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ရသည့်သတင်းသည် လတ်တလော အွန်လိုင်းတွင် လူပြောအများဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေသည်။ သခွားသီး အထဲရောက်နေခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမက ဆရာဝန်တွေကို ဖြေရှင်းချက်ပေးရာမှာ သခွးသီးပေါ်ကို သူမချော်လဲကျခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို ဖြစ်သွားရတယ်လို့ ကျိန်တွယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရ အမျိုးသမီး၏ …
Pop Pin New August 31, 2019
ကြောက်စရာကြီး တောင်ပြုံးမှာ ရဲတွေရှေ့မှာပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ဓားနဲ့ခုတ်ပြီး ပြေးတာ …(ရုပ်သံ) အပြေးကောင်းတော့ မမိလိုက်ဘူး ၊ လူအုပ်ကြီးကမိရာ ဝိုင်းဆွဲကြတာ တစ်စစီဖြစ်ရော 😳 ကိုယ်လဲ တောင်ပြုံးမရောက်ဖူးတော့ မသိဖူး …။ ဘယ်လိုအယူအဆတွေဆိုတာလဲ နားမလည်ပါ…. သစ်ပင်ကို ပါတ်လျှောက်ပီး ဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တာ အဲ့ဒီသစ်ပင်ကို ၀ိုင်းလုနေလိုက်ကြတာများ တစ်စစီကို ဖြစ်ရော… အမှားပါရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါ…..ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အမြင်လေးတွေရော…အဲ့ဒီရိုးရာ …
MOBILE LEGENDS ACC နှစ်(၃၀)အထိ BAN ခံရလို့ ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေတဲ့ကလေးငယ် (ရုပ်သံ)
Pop Pin New August 27, 2019
လူငယ်ထုအကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုကတော့ Mobile Legends ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကို လူငယ်တွေ စွဲလန်းလွန်းလို့ တစ်ချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုင်ငံအတွင်း ဆော့ကစားခွင့်ကိုတောင် ပိတ်ပင်မယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ Mobile Legends သမားတွေအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာ မကျေနပ်စရာပါ တစ်ရက်လောက် အBan ခံရရင်တောင်၊ နောက်မထိထိုင်မသာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Gamer တွေဘဝမှာ တစ်ခါတလေ အကောင့်ကို …